Orinasa mpamokatra sambo mitaingina akanjo vita tanana China Meiling
Steamer garment amin'ny tànana
Ranon-tsoabatra fitafiana mitazona tànana mitondra sambo 1000W mitsivalana & mitsivalana etona, hafanana 45 haingana, famonoana fiara, fitoeran-drano mahavokatra 90ml, ho an'ny trano sy fitsangatsanganana.
Zintin'aratra 220-240V, 50 / 60Hz
Heater fitaovana fanafanana firaka alimo
Fivoahan'ny rivotra MAX (g / min) 20g / min
Asa fanaraha-maso milina mifamadika; ironany maina sy lena
Fitaovana tehina fanohanana tsy misy tehina mpanohana
Accessories hafanana ampinga; kitapo fitehirizana
Fotoana fanofana 26-30S
Duration Duration 5-11mins
Fahaiza-mitazana rano 90ml
Steam Vonona Fotoana 35 s
Product Dimension (LxWxH amin'ny mm) 228x182x140
1. Azo vy na ahantona, ny lamba rehetra mety aminy
Teknolojia fanamainana maina maina, izay azo ampiasaina amin'ny fanasana vy maina na fanorana mando, izay tsy mitovy amin'ny fomba fiasan'ny vy nentim-paharazana. Ny masinina manamboatra vy dia manana maody etona roa amin'ny fanjakàna mandevo lena. Afaka miatrika akanjo mora foana.
2. Preheating 45, etona haingana
0.3s miditra mafy sy mihamangatsiaka aorian'ny fanoratana. Manaova fihaonambe momba ny raharaham-barotra na dia fialan-tsasatra, ity vy azo entina ity dia voasaronao!
3. etona supercharged mandona akanjo
Ary ny tontonana diavolavolain'ny fanindriana faharoa
Tontonana firaka vita amin'ny alimika vita amin'ny alimika，tontonana lehibe malama, lavaka 6 ho an'ny etona, mitsitsy fotoana handevenana.
4. Volavola ergonomika
Fitaovana isan-karazany, fametahana vy, fanodinam-baravarana tsy azo soloina no azo ahitsy sy ahodina amin'ny zoro marobe 0 ° / 180 °, mora ampiasaina. amin'ny seam, vozon'akanjo, cuffs ary bokotra mora foana. Miaraka amin'ity fitaovana marani-tsaina ity eny an-tànany dia nanjary tsy nahomby ny fanosahana akanjo tsy misy dikany.
5. Manodidina ny 310g fotsiny no misy lanjany miaraka amin'ny fitoeran-drano 90ml.
Tsotra ny fampiasana azy ary mazàna tsy misy toerana harona!
99,99% amin'ny sterilization. Ny teknolojia fanamafisana roa dia afaka manome ny etona mitohy sy mahery
6. Ny mari-pana dia azo ahitsy arakaraky ny filàny manokana na lamba hafa, mety amin'ny ankamaroan'ny akanjo sy ny asa-tanana manamboatra hafanana:
● -1 70-120 ℃ mety amin'ny nilona sy polyester
●<< ○ 100-160 ℃ mety amin'ny landy sy volonondry
●<<<< 140-210 ℃ mety amin'ny landihazo sy rongony
Previous: Jiro mamono moka
Manaraka: Steamer garment
Steamer garment ho an'ny akanjo
Steamer garment azo entina
Steamer garment matihanina
Jiro mandroaka bibikely azo alefa
Mpanadio gorodona tsy misy tariby
Jiro mamono moka
Firavaka Ultrasonic Cleaner